Cloud-Base - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်တို့ ဥပမာ POS တို့ဆို Data တွေကို Cloud ပေါ်မှာသိမ်းတယ်လို့ ပြောကြတယ် ဘာကိုပြောတာလဲ? သူ့ကိုလေ့လာမယ်ဆို ဘယ်ကစလေ့လာရမလဲ?
Cloud မှာ သိမ်းတယ် ဆိုတာ နားလည်အောင် ပြောရင် online မှာ သိမ်းတယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပဲ။
Cloud ဘက်မှာ Amazon (AWS) , Microsoft (Azure), Google Cloud စသည့် server တွေ ရှိတယ်။ Instant (Server) တစ်ခု ကို virtual ဆောက်ပြီးတော့ စိတ်ကြိုက် region(နိုင်ငံ၊ဒေသ) ကို ယူလို့ရတယ်။
ဥပမာ။ AWS က singapore region ကို ယူလိုက်ရင် singapore မှာ တော့ သိမ်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ် data center မှာ သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကို မသိနိုင်ဘူး။ AWS မှာ server တွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီလိုမျိုး managent လုပ်ပေးတာက cloud computing က လုပ်ပေးတယ်။
user load များလာရင် load balancer ခံပြီး auto scaling လုပ်လို့ရတယ်။ website တစ်ခုမှာ user load ပေါ်မှာ မူတည်ပြီး server ၁ ခု သို့မဟုတ် ၁ ခု ထက် မက အတူယှဉ်တွဲ အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။
instance (server) တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု private IP တွေ ချိတ်ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။
Cloud Computing, Cloud Infra အကြောင်းပြောရင် အများကြီးရှိပါသေးတယ်။
Data ကို cloud ပေါ်မှာ သိမ်းသည့် အတွက် data ကို စိတ်ကြိုက်နေရာကနေ ဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။ interent ပေါ်မှာက server တစ်ခုခုမှာ သိမ်းထားတယ်လို့ပဲ အလွယ် မှတ် ယူလို့ရပါတယ်။
ဘယ် Tutorial တွေလေ့လာရမလဲ ခင်များ လမ်းညွှန်ပေးပါဦး။ Data Size များသွားရင် ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရသေးလား? ဥပမာ Firebase လိုမျိုး
ဘယ်အပိုင်းကို သိချင်တာလဲ ခင်ဗျ။ ဘယ်လို project မျိုး အတွက်လဲ ?
မတူဘူးလား? ဥပမာ android POS လိုမျိုးဆိုရင်ကော
POS လိုမျိုးအတွက်က cloud ပေါ်မှာ သိမ်းမယ် ဆိုရင် firebase ကို သုံးရင် အဆင်ပြေတယ်။
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ပိုင် server side api ရေးပြီး ပုံမှန် database ထဲ ထည့်လည်း ရတယ်။ server ကိုတော့ cloud infra ရှိသည့် digital ocean, aws, azure, google cloud ကြိုက်တာမှာ ရွေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Software တွေ Application တွေအတွက် Data တွေကို cloud မှာသိမ်းတယ်ဆိုတာက တစ်ခြား cloud service provider ( AWS , Azure , Google Cloud ) တွေက အဆင်သင့်ပေးထားတဲ့ server တွေ ပေါ်မှာ data သွားသိမ်းတာကိုပြောတာပါ။ သူသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ storage limit ကိုကျော်ရင် ပိုက်ဆံစပေးရတယ်။
ဘာကောင်းလည်းဆိုတော့ ကိုယ်တိုင် storage အတွက် server ကို အစကနေ setup & configure လိုက်လုပ်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ ပြီးတော့ traditonal storage server တွေမှာဆိုရင် under utilization နဲ့ scalability problem တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ Under utliization ဆိုတာအလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ်က storage အတွက် ၁၀၀ ဖိုးဝယ်ထားပြီး တစ်ကယ်သုံးဖြစ်တာက ၁၀ ဖိုးပဲသုံးဖြစ်ရင် ၉၀ ဖိုးက အလကား waste ဖြစ်သွားနိင်တယ်။ Scalability problem ဆိုတာကတော့ ကိုယ့် application သုံးတဲ့ user တွေက ရုတ်တရက်ကြီးများလာလို့ storage ကိုထပ်ချဲ့မယ်ဆိုရင် အခက်အခဲရှိနိင်တယ်။
Cloud storage တွေမှာကတော့ pay as you go modal ပေါ်အခြေခံတယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်သုံးသလောက်ပဲပေးပေါ့။ ဒီ လမှာကိုယ့် software အတွက် data က ၂၀ ဖိုးသိမ်းရင်အဲ့၂၀ဖိုးအတွက်ပဲ ပိုက်ဆံပေးရမယ်။ အဲ့တော့ underutilization problem မရှိနိုင်တော့ဘူး။ ပြီးတော့ ကိုယ့် လိုအပ်ချက် အရ storage size ကိုလည်း လိုရင်လိုသလောက် on demand scaling လုပ်ပေးနိင်တယ်။
Cloud storage service တွေက vendor တစ်ခုတည်းမှာတင် အများကြီးရှိတယ်။ AWS မှာဆိုရင်ပဲ S3, Dynamo DB , Glacier စသည်ဖြင့်ရှိတယ်။ AWS ဆိုရင်တော့ credit card လိုမယ်။ ကျနော်ကတော့ CB bank ကလုပ်ပြီးစမ်းနေတာအဆင်ပြေတယ်။ လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ ...
AWS Basic အတွက် udemy က free course ပါ